Ny vatofantsika vatofantsika dia vatofantsika fanitarana karazana mekanika izay misy ampahany efatra: ny vatofantsika misy kofehy, ny clip fanitarana, ny voanjo ary ny mpanasa lamba. Ireo vatofantsika ireo dia manome ny soatoavina ambony indrindra maharitra tsy miovaova amin'ny vatofantsika fanitarana karazana mekanika
Ny vatofantsika Drop-In dia vatofantsika beton namboarina natao hampidirina anaty beton, matetika ampiasaina amin'ny fampiharana ambony noho izy ireo satria ny plug anatiny misy ny vatofantsika dia mivelatra amin'ny lalana efatra hitazonana tsara ny vatofantsika ao anaty lavaka alohan'ny hametrahana tsorakazo na bolt. Izy io dia misy ampahany roa: ny plug expander sy ny vatofantsika vatofantsika.
Ny mpanasa lamba fisaka dia ampiasaina hampitomboana ny tampon-tampon'ny voanjo na ny lohan'ny mpifatotra, amin'izay hanaparitaka ny hery fametahana amin'ny faritra lehibe kokoa. Mety hahasoa izy ireo rehefa miasa amin'ny fitaovana malefaka sy lavaka be loatra na tsy ara-dalàna.
Ny tsorakazo feno kofehy dia mahazatra, mora raisina haingana izay ampiasaina amin'ny fampiharana fananganana maro. Ny tsorakazo dia misy kofehy hatrany amin'ny faran'ny iray ka hatramin'ny iray hafa ary matetika no antsoina hoe tehina vita amin'ny kofehy feno, redi rod, TFL rod (Thread Full Length), ATR (All thread rod) ary karazana anarana sy fanafohezana hafa.
Ny kofehy vita amin'ny baoritra roa dia kofehy mifono kofehy izay misy kofehy amin'ny tendrony roa miaraka amin'ny ampahany tsy misy ratra eo anelanelan'ny tendrony roa misy kofehy. Ny teboka roa dia samy manana teboka mampitsangam-bolo, fa ny teboka boribory dia azo omena amin'ny lafiny roa na amin'ny lafiny roa amin'ny safidin'ny mpanamboatra, ny kofehy vita amin'ny kambana dia natao hampiasaina izay ametrahana ny iray amin'ireo kofehy misy kofehy ao anaty lavaka voadona ary voanjo hex ampiasaina amin'ny iray hafa. mifarana amin'ny fametahana fametahana eo ambonin'ny tany izay nivezivezena ny stud
Bolida heksim-by hex mainty, Hex Bolts mahery, Boloky Hex Bolts mainty, horonan, Hexagon Socket Head Bolts, Din6921 Flange Nuts,